Asa any Dubai ho an'ny vahiny ✰✰✰✰✰ Expants Avy any ambonin'ny tany
Asa any Dubai ho an'ny vahiny
Dubai ho an'ny ankizy - Fiainana miasa sy fitaizana any Dubai
Asa any Mumbai - Manakarama eto India izahay!
navoakan'ny Dubai City Company at Jolay 27, 2018
Jobs ao Dubai ho an'ny vahiny
Jobs in Dubai ho an'ny vahiny manerana an'izao tontolo izao. Mijanòna fitadiavana asa. Ary mitadiava fotoana hiarahanay. Ekipanay manam-pahaizana momba ny matihanina. Manampy hiaina fiainana vaovao Emirates. Indrindra ho an'ny mpiasa vaovao any ivelany. Noho ny Asa any Dubai. Ho tonga zava-misy marina ho an'ny vahiny. Ao an-tsaina, mandray kandidà isika avy amin'ny manerantany. Ny ekipanay amin'ity antony ity dia tena manosika ny mpitsoa-ponenana. Mba hahazoana asa maneran-tany. Hatramin'ny nanombohanay niasa. Ireo mpikaroka vaovao dia afaka mandefa CV ho an'ny orinasa fandraisam-bahiny any Emirates. Ary nanamarika fa maro tamin'izy ireo no nahazo asa avy any ivelany any ivelany.
Amin'ny ankapobeny, ny Emirà Arabo Mitambatra. dia ny toerana lehibe indrindra ho an'ny vahiny. Satria ity firenena Arabo ity dia hita ao amin'ny Ho an'ny Persian Gulf. Ary ao an-tsaina, ity toerany ity dia tsara Indian ary Mpitantana Pakistane. Amin'ny lafiny tsara Dubai City sy Abu Dhabi. Aoka ho tonga saina foibe fandraharahana any UAE. Satria manana sisintany amin'i Oman sy Arabia Saodita. Ary ny porofo manamafy indrindra milaza fa manatsara izy raharaham-barotra. Indrindra fa ny manodidina. Ankoatra izany, ny fiteny ofisialy dia Arabo. Ary misy izany Tsara ny manomboka any UAE. Satria fotsiny ny dingana manaraka mety ho Qatar sy Arabia Saodita.
Saingy eo amin'ny lafiny ratsy, misy zavatra vitsivitsy mila arahina. Alohan'ny hahatongavan'ny olona vaovao any Emirates. Amin'ny ankapobeny ny ekipantsika mpahazo ekipa. Nanoratra zavatra maromaro mpitarika ary ny loharanon-karena. Indrindra ho an'ny mpanatanteraka vaovao. Mba hanampiana azy ireo hanomboka hitady asa any Dubai City. satria mahita fahafahana amin'ny maha vahiny azy. Mafy be ny sevy indrindra amin'ny Emira Arabo Mitambatra.
Ampiasao amin'ny tranokala fikarohana ny tranokala
Amin'ny ankapobeny dia miteny, ampiasao ny tranonkalan'ny fikarohana asa any UAE. Efa nametraka mpitarika tsara maromaro ny ekipanay. Indrindra ho an'ny vaovao monina any ivelany. Na izany aza, miresaka ny tranonkala vitsivitsy eto ambany indray ny ekipanay. Amin'ny lafiny ratsy, a ny olona mahazatra dia tsy afaka manantena be loatra. Ny famerenana farany dia manodidina ny 2.0% hatramin'ny 3.0% ary ho an'ny valiny mazava dia ambany. Ary ny ankamaroan'ny tranga, ny olona izay hamaly anao izy. Angamba tsy ilay olona antenainao Na mety ho araka ny antenaina ny tolotra omena asa. Mahafantatra izay nalefanao ny taratasy fangatahana sy CV anao. Satria misy orinasa marobe manerana izao tontolo izao.
Na izany aza, Dubai City Company Mampirisika anao hanandrana. Misoratra anarana ny antsipirihany ao amin'ny toerana misy ny asa sy ny vavahadin'ny mpiasa. Amin'ny ankapobeny dia omeo ezaka amin'ny fitifirana tokana ireto mpividy ireto. Satria tsy hainao mihitsy izay hitranga. Ary eo Mety hipetraka any Afovoany Atsinanana ianao. Satria indrindra any Dubai City. Ny fifandraisana tsotra iray dia afaka manao asa tsotra tsotra. Ary mety ho lasa mpitsoa-ponenana vaovao ianao. Noho ny asa fitadiavana ankapobeny. Tsara ho an'ny asa vaovao sy ny asa any Dubai ho an'ny vahiny mbola misokatra. Saingy, manampy anao hahita fomba fijery vaovao ny asa fanalahidinao.
Ahoana no fomba hitadiavana asa toy ny foreginer?
Fantaro bebe kokoa momba ireo toeram-piasana any UAE
About Gulf Talent: Iray amin'ireo tsara indrindra any amin'ny Golfa. Amin'ny ankapobeny dia misy karazana asa tsara. Nohavaozina isan'andro vaksiny ho an'ny firenena Golfa. Ary ny asa matihanina dia manolotra any Qatar ary koa Abu Dhabi. Betsaka ny olona nahita Jobs tany Dubai ho an'ny vahiny eto amin'ity tranokala ity.
About Bayt: Firy ny orinasa 1 any Moyen-Orient. Tena nilaina ho an'ny vahiny. Ary iray amin'ireo tranonkala ambony indrindra momba ny asa. Olona manerana ny Moyen Orient sy India ary koa ny International. Fandefasana CV any amin'ny lehibeny.
Momba an'i Edarabia Ity orinasam-bola ity dia iray amin'ny fitomboan'ny haingana. Orinasa iray no tanjona voalohany indrindra dia ny fanabeazana ny olona sy ny vahiny. Ity orinasa ity dia iray amin'ireo laharana ambony indrindra Google. Raha ny tena izy dia manana asa atolotra. Amin'ny lafiny iray, ny Ny orinasa dia manome toro-lalana vitsivitsy ho an'ny mpikaroka asa.
About Dubizle dia ny tranokalan'ny fanabeazana goavana. Indrindra ao an-tanànan'i Dubai. Etsy andaniny, jna ireo mpikatroka mampiasa ny fizarana UAE ho hitady asa amin'ny visa. Fanombohana ny orinasa amin'ny 2005. Nanomboka teo dia nalaza be ny dubizzle.com. Ary ny isan'ny Asa vaovao no navoaka. Amin'ny ankapobeny dia misy sehatra voafantina. Azo antoka fa ho an'ireo mitady asa sy mpampiasa.
About Gulf Monster: Ao amin'ny tranokala misy ny biby. Azonao atao ny mitady asa. Satria efa ela no nijanonan'ny orinasa. Ary nanomboka teo dia misy ny biby goavambe. Ary tsara be olona misoratra anarana miaraka aminy.
About Glassdoor: Ny orinasa, raha ny tena izy, dia manomboka mametraka ny fahafahana. Indrindra ho an'i Dubai sy Abu Dhabi. Ary hatramin'izao, afaka mahazo fanavaozana ny orinasa. Ary mametraha fanadinadinana. Ankoatra izany, Ireo mpikaroka asa dia afaka mihatra amin'ny asa atao amin'ny fampianarana MBA.
About Career Jet Careerjet dia milina fikarohana karatra farany. Ary afaka mampiasa azy ny ankabeazan'ny olona Emira Arabo Mitambatra. Na inona na inona ny traikefany. Amin'ny lafiny iray, ny rafitra natao dia manjary mora kokoa ny fitadiavana asa. Ary lasa mora kokoa ho an'ny mpampiasa ny aterineto. Rehefa nanomboka ny tranonkala Career jet.
Momba ny Careers any Dubai Ny Career Dubai dia asa vavolon'ny asa. Ankoatra izany dia fomba fanavaozana ny mpitady asa. Amin'ny ankapobeny, novolavolain'ny Smart Dubai Government Establishment. Noho izany, manana fahatokisan-tena ambony ry zareo. Amin'ny lafiny iray, ity vavahadin-tserasera ity dia azo antoka fa hamindra ny lalana any UAE.
About Reed: Io no iray amin'ireo UK lehibe indrindra asa fikarohana milina. Amin'ny lafiny iray, manana postingan'ny asa ho an'ny UAE. Ao an-tsaina, olona avy any Angletera ary Mpikaroka iraisam-pirenena. Afaka mangataka alalana amin'ny asa vaovao. Ankoatra izay dia mandefa tolotra asa amin'ny GBP izy ireo. Noho izany dia tena sarobidy ny mijery.
About Indeed Ny orinasa dia ny tranonkalan'ny No.1. Ary nasongadina tao amin'ny 3 ambony manerana izao tontolo izao. Amin'ny ankapobeny dia mitombo ny orinasa. Miaraka amin'ny mpitsidika miisa 200 mihoatra ny 2018. Ary manana fanoratana vaovao isam-bolana.
About Naukri, Ny orinasa Dubai City dia nanamarika ity tranonkala ity. Satria i Naukri dia nirotsaka eran'izao tontolo izao. Ohatra, ao India, UAE, ary Qatar Ity tranonkala ity dia sarimihetsika feno hafatra ho an'ny mpiasa any ivelany. Toy izany koa ny tolotra vaovao momba ny tsena ao an-toerana.
About Laimoon: Ity tranonkala ity dia tsy izany malaza amin'ny asa any UAE. Noho ity tranokala ity dia manangona ny fisokafan'ny asa amin'ny tranokalan'ny orinasa. mivantana ary manana lahatsoratra ho an'ny Qatar sy Arabia Saodita.
Ny asa any Dubai ho an'ny vahiny no mendrika izany?
Maro ny ny fahafaha-manao asa any UAE. Avy amin'ny fampianarana ny teny anglisy ka hatramin'ny asa manual. Ny manomboka amin'ny toerana ambany dia mety ho safidy. Ny tenanao ihany no mpiteny Arabo. Amin'ny ankapobeny, raha tsy manana ny traikefa anananao ianao. tsy misy ny fiteny arabo any Dubai. Azo atao ny mamarara ny asa. Ireo toerana rehetra eo amin'ny farany ambony. Azo antoka fa vonona ho an'ny asa any Dubai ho an'ny vahiny. Ambonin'izany, mitovy daholo ny azy ireo.
Amin'ny lafiny ratsy, izy rehetra dia samy manana Betsaka ny safidin'ny asa vaovao. Noho izany, ao an-tsaina, maro ireo olona manefa resume. Ary ireo mpitady asa vaovao dia afaka mitantana ny fangatahan'izy ireo isan'andro. Amin'ny alàlan'ny tranokala asa tsirairay. Amin'ny lafiny tsara, Mitombo taona i Dubai. Ary ny fiteny Anglisy dia lasa lohalaharana any Emirates. Ao an-tsaina, asa any amin'ny Emira Arabo Mitambatra. Manomboka koa ny hitombo manerantany. Avy eo, nisokatra ny asa tany Dubai ho an'ny vahiny. Mpiasa vaovao any ivelany. Afaka manantena hahita asa tsara. ary firenena samihafa manodidina ny Faritr'i Golfa. Afaka ny trano vaovao ho an'ny vahiny.
Ara-drariny ho an'ny vahiny ve i Dubai?
Ny Emirates dia iray amin'ny toerana tsara indrindra eto ambonin'ny tany. Amin'ny lafiny iray, ny rafitra ara-dalàna dia miorina amin'ny fifanarahana sarotra vitsivitsy. Ohatra, ny fandikana henjana amin'ny lalàna Sharia. Ary na inona na inona zava-mitranga dia tsy maintsy narahina. Iray amin'ny Ohatra ny mpiasa iraisam-pirenena. Matetika izy ireo no mipetraka ao Abou Dhabi na Dubai mba hiasa. Manomboka ny fiainany ho vahiny. Ary aza manaraka ny fitsipika. Noho izany, amin'ny fotoam-potoana, tanindrazana am-ponja noho ny fandikan-dalàna. Izany no mahatonga ny UAE manandrana mampianatra ny Tandrefana. Inona no tokony hatao? aza manao any UAE. Tena manampy azy ireo izany tsy hoe hanao heloka bevava tokana akory izy ireo.
Etsy ankilany, misy ohatra vao haingana teo Tanànan'i Dubai. Ilay mpizahatany vahiny dia nanapaka ny lalàna. Ary miezaha hifanaraka amin'ireo mpisolovava. Indrisy, ny Emira Arabo Mitambatra hentitra ny lalàna ho an'ny rehetra. Ampidiro mandrakariva ny asan'ny tanana eny imasom-bahoaka. Ankoatra izany, mandefa ny fiderana ao amin'ny Facebook ho an'ny asa soa. Ankoatra izany, misotro toaka raha tsy misy fahazoan-dàlana dia voarara mafy imasom-bahoaka. Adio ny sasany amin'ireo vaovao ratsy, ohatra, ny fizarana efitrano fandraisam-bahiny amin'ny olona iray amin'ny lehilahy mifanohitra (hafa ivelan'ny mpivady).
Ankoatra izany, ny tsy fahazoana manao ny rariny any Dubai amin'ny tranga sasany. The governemanta tao amin'ny Emira Arabo Mitambatra. Jereo foana ireo fomba maro hanontaniana. Aza avela handika ny lalàna Sharjah intsony raha tonga fitondran-tena ratsy amin'ny vahiny. Etsy ankilany, misy vitsivitsy miavaka ho an'ny vahoaka iraisam-pirenena. Ohatra, Hotely Dubai sy Abu Dhabi Aza manontany mpivady momba ny fahazoan-dàlany amin'ny fanambadiana.
Izay ny mahazatra ho an'ny mponina any Dubai. Ankoatra izany, ny UAE dia manana fivelom-bahaingoana ho an'ny rehetra. Mety ho somary hafahafa ihany izany saingy trano fisakafoanana pelaka sy club marobe Eoropa Atsinanana Ny mpivaro-tena dia mahita mpividy vaovao. Moa mahazatra nisokatra ho an'ny iraisam-pirenena manerana ny Emirà Arabo Mitambatra.
Ny asa any Moyen-Orient
Mitadiava firenena samy hafa miasa. Betsaka ny safidy amin'ny faritra Golfa!
Qatar, Arabia Saodita, Emira Arabo Mitambatra, Jordania
Qatar sy Expats
Ahoana no hanombohanao ho iray amin'ireo vahiny any Qatar?
Aty Qatar dia maro be ny fomba ahazoana miasa. Ohatra, ny tatitra nataon'ny Amnesty International dia nilaza izany mpiasa vahiny no tompon'andraikitra amin'ny fananganana tetikasa ho an'ny tanàna vaovao any Qatar. Ary izay mikasa ny hampiasa be misimisy kokoa ny Qats eto Qatar. Amin'ny lafiny iray, ny kapoakan'izao tontolo izao amin'ny lalao 2020 dia hararaotina ary iharan'ny fanitsakitsahana zon'olombelona mahery vaika na dia eo aza izany ny fampanantenan'ny fanavaozana ny governemanta. Amin'ny lafiny iray, misy zavatra vitsivitsy tokony ho fantatrao aloha vao mifindra any Qatar.
Raha miasa tsy misy orinasa ara-dalàna ianao. Ny tatitra nataon'ny orinasa vitsy dia nanoratra orinasa injeniera miaraka amin'ny anarana, Mercury MENA, izay nandao ny mpiasa 80 avy any Nepal, India, ary nirehitra sy tsy voaloa nandritra ny volana maro tao Qatar i Filipina. Noho izany, mila misafidy orinasa tsara foana ianao hiasa ho an'ny Moyen Orient.
Saingy ny fanjakana dia nanome baiko ireo orinasa ihany koa. Tsotra satria fantatra fa nampiasa ny firafitra Kafala izy ireo izay misolotena ny programa mpanohana an'i Qatar. Ary izany no mahatonga ny mpiasa hifikitra amin'ny mpampiasa tokana hitrandraka ny marobe amin'ny mpiasa vahiny. Tao Nepal, olona 34 no nitatitra tamin'ny Amnestie fa vola mivoaka 1,500 no isan'izy ireo i Mercury MENA, ary ny rafitra Kafala dia nampiasaina hanararaotana azy ireo. Noho izany, miezaka foana hiresaka amin'ny ekipanay na farafaharatsiny hisorohana ireo orinasa ratsy.
Ahoana ny fampiharana ny asa any Qatar?
Qatar tsara indrindra toeram-piasana dia mifandraika amin'ny Governemanta. Iray amin'ireo ohatra ireo Site site an'ny minisitera. Izy ireo no iray amin'ny tranokala tsara indrindra fantatra amin'ny afovoany visa ho vaovao. ary afaka misafidy karazana Visa ianao mitady mitady ianao. Ohatra, azonao atao ny mangataka ny visa ho an'ny mpianatra, visa ho an'ny mpitsidika, visa visa. Amin'ny ankapobeny, misy tsy olana ny mahita fampahalalana toy izany ao amin'ny Google. Ny loharano tsara indrindra amin'izany dia masoivoho iray eo an-toerana. Amin'ny lafiny iray, afaka mandeha any amin'ny consulat any amin'ny firenenao ianao. Saika visa avokoa ny rehetra ao Qatar. Noho izany, izao no fotoana hanazavana tranokala azo omena olona mitady asas ao Qatar no voasoratra eto ambany.
Tsy mora anefa ny mahita asa any Qatar amin'ny maha vahiny azy, raha ampitahaina iray afovoany - firenena atsinanana nefa azo atao. Ny antontan-taratasy ilaina izay toa mitaky ny fametrahana ny asa dia lehibe dia lehibe. Saika ny karamany anefa iray amin'ireo tsara indrindra any Moyen-Orient.
Arabia Saodita sy ny Embassy
Ahoana no hanombohana ny iray amin'ireo mpiasa vahiny ao Arabia Saodita?
Eny, ao Arabia Saodita, ny mpiasa vahiny dia tombanana ho 15million toy ny 2019. The Fandraharahana solika sy fotoana vaovao hita ato amin'ity firenena ity ny mety hitranga lehibe. Ary io no antony namporisihina ny fifindra-monina any amin'ny tara farany 1930. Amin'izao fotoana izao, manana safidy goavana izy ireo amin'ny fampandrosoana an'i Arabia Saodita. Noho izany, manakarama ny mpiasa vahiny. Na dia voarotsaka amin'ny sehatra hafa toy ny fambolena, indostrian'ny serivisy ary fanadiovana aza ny sasany. Raha ny fitiavana Saudi Arabia no mifono asa hanana ny zava-drehetra amin'ny toerana sy vonona handeha amin'ny fotoana rehetra.
Toy ny ao amin'ny firenena silamo mahazatra. Ny zom-pirenena vahiny no mamaritra ny ambaratongam-pahefana ao mpiasa vahiny. Ary mety ho gaga ianao, ohatra, mpiasa avy any India sy firenena tandrefana izay nafindra tany Arabia Saodita. Matetika izy ireo no mitazona ny toerana ambony indrindra tsy tantanin'ny mpitantana Saudis. Ary ny toerana ambany dia tazon'ny Afrikana sy aziatika atsimo.
Ny firenena Saodiana taloha dia iray amin'ireo mahantra sy mahantra indrindra firenena tsy mbola voalamina eran'izao tontolo izao efa ela izay. Saingy talohan'ny nahitana ny menaka nataon'i Texaco Oil (orinasa amerikana). Tsy ela taorian’ny nahitana azy. Ny fanampiana avy any ivelany ary fahaizany ilaina ny mitrandraka ny be dia be hita tahiry.
Nisy fiakarana lehibe teo amin'ny isan'ireo mpiasa vahiny tany Arabia Saodita. Ary vokatry ny ny fahitana indrindra avy amin'ireo firenena Afovoany Atsinanana hafa. Ny tetik'asa fampandrosoana sy ny drafi-drafitrasa dia nandrisika ny fidiran'ny mpiasa mahay sy ny mpiasa tsy mahay. Ary ao an-tsaina izany, ny ankamaroan'ny mpiasa dia Palestiniana. Ary avy eo dia manomboka mandray ny Ejiptiana, Yemenis sy ny sasany izy avy any amin'ny firenena Arabo.
Koa, misy asa ho ahy any Arabia Saodita?
I Arabia Saodita dia fantatra fa firenena Arabo manankarena indrindra mandra-2023. Azo antoka fa fampahalalana tsara izany for expats. Zareo dia manana orinasa maro izay hita any Moyen-Orient. Ny orinasanay dia eo foana no misy toerana mitady asa ho an'ny mpikaroka amin'ny maha-vahiny any Arabia Saodita. Amin'ny lafiny ratsy, any Arabia Saodita, Ny fizotran'ny visa dia tsy mora loatra ihany koa. Izahay no milaza fa iray amin'ireo henjana sy misavoritaka indrindra eto amin'izao tontolo izao. Indrindra ho an'ny vahiny avy Eoropa na ny Etazonia.
Tsy eken'ireo ekipa marketing any Saudi ny fizahantany fizahan-tany. Tsy karazana olona mandray an'i Dubai izy ireo. Noho izany, toa tsy ho vita ny hahazoana visa mpizahatany amin'ny herinandro latsaky ny 2. Misy ny fironana tsy hanaiky hiditra ao Arabia Saodita. Indrindra ho an'ny olona manana hajia israeliana. Ka raha avy any amin'ity firenena ity ianao izay manana pasipaoro havaozina. Na inona na inona ataonao, Mila antontan-taratasy ihany koa ry zareo. Fa io dia mety ho takiana amin'ny fangatahana ny asanao. Amin'ny ankamaroan'ny tranga, na izany aza.
Iray amin'ireo torohevitra manan-tsaina ho an'ny asa any. Ny fananana antontan-taratasy toy ny fanamarinana ambony indrindra any an-tsekoly. Tena manampy raha hanampy azy ireo ianao iray amin'ireo firenena Silamo. Ohatra, ny oniversite na ny oniversite, ny mari-pahaizana momba ny toetrany ary ny fanamarinana hafa mifandraika amin'izany. Avy ao amin'ny University any Qatar na ny United Arab Emirates. Fa amin'ny lafiny tsara, ilay hany zavatra hahazo anao asa iray ny CV anao. Noho izany, mila fantatrao hoe aiza no hahavoa amin'ny fampiharana. Ohatra, raha manao ny marketing amin'ny fomba tsara. Tokony ho vonona hiasa aminao ny mpiasa. Ary ny fotoana sy ny ezaka ataonao dia haverinao ho tonga lafatra ny CV anao. Te ho very foana amin'ny fotoana rehetra.
Ny Emira Arabo Mitambatra sy ny Expats
Ahoana no hanombohana ny maha-vahiny amin'ny UAE?
Eny, any Emirà Arabo Mitambatra (UAE), ho an'ny mpifindramonina ny Governemanta UAE. Ary faly ity firenena ity haka mpiasa vaovao avy any ivelany. Fanampin'izany, ireo vahiny avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao. Moa mitady ny hifindra any nefa mbola tsy mahavita hetra. Ankoatra izany, ny asa mifandraika amin'ny governemanta dia heverina ho tsara indrindra. Noho ny olom-pirenena UAE dia mino fa misy ny mahamenatra miara-miasa amin'ny sehatry ny sehatra tsy miankina sasany. Ny ankamaroan'ny Arabo eo an-toerana dia miara-miasa amin'ny fifanarahana ataon'ny governemanta sy tetikasa na asa any amin'ny tafika. Mora be ny fizotran'ny visa sy ny antontan-taratasy ara-dalàna. Ambonin'izany, ny fiaraha-monina, raha oharina amin'ireo firenena manodidina. Ohatra, Saudi Arabia sy Qatar dia tsara kokoa raha ny fomba famindrana ny resaka.
Ny UAE dia manana endrika manintona kokoa izay azonao an-tsaina koa. Ary ao an-tsaina, ireo vahiny manerantany mandeha eto. Iray amin'ny ireo mpitady asa izay ampidirintsika dia ireo olona avy any amin'ireo firenena tandrefana. Amin'ny ankapobeny dia vitsy ny isan'ny mponina ao amin'ny fireneny. Ohatra, amin'ny tahan'ny sivy sivy iray. Ankoatra izany, ny governemanta UAE dia nametraka ny lalàna. Ary izany dia milaza fa mpila ravinahitra iray dia mendrika ny hanao fangatahana ho olom-pirenen'ny UAE taorian'ny nijanonany teto amin'ny firenena nandritra ny fe-potoana farafahakeliny 30. Ka raha ny tena izy, dia tsy maintsy ho efa ela no nitoeranao. Dieny mbola tsy natao mahazo tombony ho lasa olom-pirenena UAE.
Inona no mila ataoko miasa any UAE?
Ny zavatra farany dia ny antontan-taratasin'ny UAE hitadiavana asa. Ohatra, mari-pankasitrahana UAE ambony indrindra any am-pianarana. Hanao Azo antoka fa hanampy anao hampiakatra barina ho fotoana vaovao. Ary raha manana ekipa iraisam-pirenena na oniversite. Azo antoka izany manampy anao hanangana karne UAE. Amin'ny lafiny iray, ny fanamarinana ny toetran'ny toetra sy ny fanamarinana hafa mifandraika amin'ny loharanom-panajana toa an'i Etazonia na UK dia tombony amin'ny tontolo arabo. Saingy ny tena zava-misy, ny hany zavatra hahazo anao asa dia ny Resumeo. Manao ny varotra ny traikefa anananao, noho izany dia tsara ny manandrana ho tonga lafatra ny CV anao. Ary azonao antoka foana fa tsy misy lesoka. Tsy maintsy tadidina io ao amin'ny United Arab Emirates dia afaka mampiasa CV anglisy ianao.
Ny firenena Jordania sy ny Expats
Ahoana no hanombohanao ny iray amin'ireo vahiny any Jordania?
Ny toerana iray hafa any Moyen Orient dia i Jordana. Satria ity firenena ity dia mirakitra an-tsoratra. Olona tsara izy ireo ary manana trano fonenan'ireo mpitsoa-ponenana Palestiniana 2 tapitrisa toy ny ao amin'ny 2015. Ka tsy hoe manakarama ihany izy ireo fa manohana ny hafa koa. Manodidina ny 98% ny mponina any Jordaniana dia Arabo. Ankoatra izany, ny sisa 2% dia foko vitsy an'isa. Fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa tany Jordania. Miorina amin'ny fahitalavitra sy Vaovao fa sarotra kokoa ny toe-javatra momba ny asa any Jordania. Noho ny ny fisian'ny mpiasa mahay ambany ao amin'ny country. Ohatra, ny mpiasa vahiny ao amin'ny tatitra mitondra ny lohateny hoe "tsena sarotra ho tonga sarotra kokoa". Noho izany, tsy maintsy miomana ianao ary mitady asa mahomby kokoa. Mpitantana na mpitantana antitra ihany koa.
Vokatry ny fikarohana be dia be natao tamin'ny volana septambra 2016. Fikambanan'ny governemanta izay nokendrena sy nohaingoana. Betsaka ny olona niditra ny vokatry ny fandraisan'anjara maimaimpoana an-tanan'i Jordania amin'ny fametrahana vahoaka marobe mpitsoa-ponenana. Ankoatr'izay, eo amin'ny tsenan'ny asa nasionaly dia nambarany fa ny mponina miasa azy. Ny tatitra momba ny governemanta dia mikasa mamaly ny fanontanian'ireo mpiasa vahiny. Ahoana ny fomba hampitomboana ny tahan'ny asa any Jordania eo amin'ny tsenam-pirenena.
Moa ve misy asa ho ahy any Jordania?
Amin'ny lafiny iray kosa izy ireo dia manandrana mahita hoe ahoana no hahazoana antoka fa mahazo aina tsara ny mpiasa rehetra. Tsy ny avy any ivelany ihany fa na izany aza ho an'ny karazana expats sy ny mpiasa an-toerana rehetra ihany koa. Ary koa, ny fomba hampidirana ireo mpitsoa-ponenana Syriana nefa tsy manala mpiasa Jordania. Ary izany no fanontaniana lehibe napetraky ny mpikambana Eropeana. Ny fanokafana ny tsenan'ny asa ho an'ny mpitsoa-ponenana dia natao mba hahazoana antoka fa ny fikarakarana manokana dia ny fampiharana faran'izay kely indrindra fenitry ny asa ho an'ny mpiasa vahinys, tsy ekena ny toerany. Raha manana fahazoan-dàlana amoron'i Jordan, ny lahasa miasa amin'ny mpampiasa anao no voalohany nitaky fangatahana asa any Jordania dia mora miditra amin'ny tranokalan'ny governemanta.
Firenena Kuwait sy Expats
Ahoana no hanombohanao amin'ny iray amin'ireo mpiasa vahiny ao Koety?
Any Koety, misy fiovana lehibe tato anatin'ny taona vitsivitsy. Iray amin'ireo ohatra ny rafi-piasan'ny mpiasa vahiny. Ho lasa ara-dalàna sy amin'ny vokatra, dia tsy maintsy hamatsy vola ny mpampiasa any an-toerana mba hahazoana fahazoan-dàlana. Noho izany, misy ny mahira-tsaina matotra iray izay olona marobe no manandrana ahatafita ho tonga mitady olona mahombys. Nisy fanovana lehibe tamin'ny volana Aogositra 2008, nilaza ny solombavambahoaka Abdullah Al-Roumi fa hanomana lalàna manafoana ny rafitrasan'ny mpiasa vahiny kafeel any Koety izy. Noho izany, mitantana izany amin'ny fomba mety izy ireo. Ankoatra izany, fanovana izany dia ny fanampiana ireo mpifindra monina. Nikasa ny hanafoana ny rafitra mpanohana ny governemanta mba hamoronana rafitra vaovao. Ary tian'izy ireo ho marina izany satria izay hahafahan'ny vahiny mamindra ny fahazoan-dàlana fonenany. Ary izao dia miatrika ny raharaha ny minisiteran'ny asa sosialy sy ny mpiasa.
Amin'ny lafiny ratsy, amin'ny maha vahiny azy ohatra avy any Soisa. Afaka mahazo asa any Kuwait ianao. Ary io asa io ho azo antoka dia ho voaloa tsara ary maharitra ela. Ary noho izany, asa iray izay any Kowlama no manangona hetsika matotra. Saingy alohan'ny hanombohanao ny asa dia mila visa visa ianao toy ny any amin'ny firenena Arabo rehetra. Ny fahazoan-dàlana sy ny visa fahazoan-dàlana dia zavatra samy hafa, mba hahazoana antoka fahazoan-dàlana dia tsy maintsy niara-niasa tamin'ny mpampiasa anao nandritra ny fotoana kelikely ianao, ary rehefa avy nahazo fahazoan-dàlana dia mila hahazoana ny visa fahazoan-dàlana amin'ny masoivoho akaiky indrindra.
Koa, misy asa ho ahy ve any Koety?
Ny firenena any Koety dia manana iray amin'ireo tranonkala tsy miankina tsara indrindra. Fantatrao amin'ny fampahalalana momba ny visa afovoany. Izany koa na inona na inona karazana Visa andrasan'ny vahiny. Ohatra, mety ho visa visa na visa an'ny mpitsidika, ary amin'izany, tsy tena afaka mitantana azy ianao. Amin'ny lafiny iray, amin'ny visa visa sns Mazava ho azy fa tsy hisy olana ny hahita fampahalalana toy izany ao amin'ny Bing na Google. Ireo tranonkala tsara indrindra azon'ny mpitady asa any Kuwait dia voatanisa an-tserasera. Afaka mahita azy ireo manoratra ianao Asa any Koety ho an'ny vahiny na fikarakarana any Kuwait.
Koety ho toy ny firenena dia manana ny toerana misy azy ireo tsara indrindra amin'ny sehatra ara-bola. Noho izany, mba hahitana asa ho toy ny teratany vahiny, dia tokony hahita trosa ara-bola amin'ny voalohany ianao. Amin'ny lafiny iray koa, rehefa nampitaha ireo firenena afovoany - atsinanana iray izahay tsy mora ny mahazo fa azo atao. Koety no mila dokotera izay azo takiana amin'ny alàlan'ny masoivohitr'i Kuwait.
Famaranana ho an'i Dubai ho mpiasa vahiny
Jobs in Dubai Ny vahiny dia tsara ny mandeha manerana izao tontolo izao. Ary amin'izany, ao an-tsaina, olona maro. Indrindra fa ireo mpitantana, izay tsy maintsy manana vintana tsara ho an'ny asa. Ny hany tokana Ny teboka dia fomba fiaina any Dubai na Abu Dhabi. Ireo mpitsidika vaovao any Emirates. Tokony hanaraka fitsipika maro. Amin'ny lafiny iray, i Dubai dia mandray ireo mpanatanteraka vahiny. Ny iray amin'ireo ohatra ireo dia ny seranam-piaramanidina any Dubai, hotely na fiasan'ny fiara. Amin'ireo toerana rehetra ireo any Dubai. Ny olona vaovao no hita. From Pakistane mpiasa hatramin'ny mpanatanteraka Indiana. Noho izany, ny orinasantsika dia manoro hevitra ireo mpiasa avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao. Mazava ho azy, ny mitsidika an'i Dubai City sy manomboka miasa any ivelany.
Na iza na iza firenena dia manome ireo tranonkala ireo ho an'ny mpikaroka asa any ivelany dia maniry ny hahazo asa any Atsinanana-Afovoany. Ka averinay indray eto amin'ity tranokala asa ity.
Top jobs sy portails
Gulf Talent manana toetra tsara sy asa be karazana be
Jobs in Dubai manana lahatsoratra amin'ny toerana manokana toerana any Dubai
Jobs Abu Dhabi dia manana hafatra amin'ny toerana manokana any Abu Dhabi
Dubizzle dia sokajiana ho toerana goavana ho an'i Abou Dhabi
Glassdoor dia fantatra fa manana fahafahana any Abou Dhabi sy Dubai
Bayt is considered ho iray amin'ireo tranonkala fikarohana momba ny asa any Atsinanana Afovoany.
Gulf Monster dia marika fitadiavana asa goavambe izay efa nisy hatramin'ny faran'ny vanim-potoana internet.
Gulf Jobs tsara ny tsena ho an'ny asan'ny mpanatanteraka.
Career Jet dia malaza amin'io manana safidy ho an'ny asa any UAE.
Tokoa no dikan'ny asa any Etazonia any UAE.
Learn 4 Tsara toa amin'ny asan'ny fampianarana ihany fa manana asa any amin'ny sehatra hafa.
Laimoon dia tranonkala iray fantatra ho fanangonana asa fanokafana asa avy amin'ny vohikalan'ny orinasa mivantana.
Mampianatra ny teny Anglisy any Afovoany Atsinanana
Fomba hendry iray hafa, ary aza adino ny manadino ny mampianatra anglisy. Ary ny orinasantsika dia mampatsiahy foana, ho an'ireo izay mety hahaliana amin'ny fampianarana, ny fampianarana anglisy. Mety tena misafidy ny manan-tsaina sy mora indrindra safidy. Mazava ho azy, raha mahay teny anglisy Anglisy na manao fanoratana. Ny ekipa mpirotsaka an-tsehatra dia tokony ho mitady mpikaroka vaovao hitodika isaky ny tranonkala ho an'ny asa ho an'ny fampianarana any UAE dia afaka manandrana tranonkala toa izany izy ireo;
Total ESL dia interface tsara be zotom-po ho an'ireo maniry hampianatra any ivelany.
Kafe ESL dia iray amin'ireo fisokafana asa tsara indrindra manerana izao tontolo izao.
Testall dia tranokala manangona asa lehibe amin'ny fampianarana.
dian-tongotra fandraisana mpiasa dia hita ho iray amin'ireo mpahazo am-pikarohana lehibe indrindra amin'ny ESL misy.
Ho an'ireo liana amin'ny Asa ara-bola, indreto misy Overseas ary Expat Job Portals;
eFinancialCareers dia iray amin'ireo fitaovam-pitadiavana ankafiziny indrindra ho an'ny asa fanasoavam-bola ao amin'ny tranonkala, saingy na dia izany aza, tsy afaka mahazo an'i Qatar izy ireo
Mandehana any ivelany dia hita fa manana asa tsara koa
Oversea Jobs dia tranonkala iray izay efa nisy fotoana vitsy izao saingy toa misy fifandimbiasana goavana eo amin'ireo hafatra eo amin'ireo tranonkala sy tranonkala hafa.
LinkedIn dia tambajotra matihanina matihanina amin'ny fananganana fifandraisana eo amin'ny sehatra ary koa ny toerana misy anao
Misy tranonkala hafa toy ny;
The Guardian dia fantatra ho iray amin'ireo pejy manerantany ho an'ny fikambanana any UAE
Telegraph manome torohevitra ara-bola tsara ho an'ny fanomanana
Moyen Orient, indrindra ny UAE, Arabia Saodita sy Qatar. Tsara foana ny tolotra asa ho an'ny vahiny any amin'ny faritra maro, fa tsy amin'ny faritra afovoany-afovoany. Simply satria mitady hamorona tetikasa maro kokoa izy ireo. Fa amin'ny lafiny ratsy, misy fomba raisina ilaina amin'ny mpiasa any ivelany. Ohatra, ireo antontan-taratasy mety mitaky fampiharana amin'ny asa dia:
Kopia karatra maha-ray aman-dreny azy
Fandefasana sary miloko manga 24
Lisitry ny fiara (raha manana)
Visa fanazavana sy taratasy
Kaonty Banky avy amin'ny firenenao
POI - porofon'ny maha-izy azy (fanampiny iray)
Ary koa ny mari-pahaizana diploma voalohany (raha manana)
2 miloko fanangona pasipaoro
POA - porofon'ny adiresy
Ny kopian'ny fanabeazana fianarana amin'ny sekoly
Tsy maintsy nanao mari-pahaizana tao amin'ny oniversite
Ary zavatra vitsivitsy hafa mety hangatahany
Noho izany, araka ny hitanao, dia misy fotoana ho anao. Ny hany mila ataonao dia ny fananana herim-po ampy hanombohana fiainana vaovao any ivelany. Misy mihoatra ny 3 tapitrisa expatriates miasa any Moyen Orient. Afaka ny ho tonga iray amin'izy ireo koa ianao. Ary raha ny marina dia mila manana drafitra asa tsara ianao. Ary koa, ny zava-drehetra ao amin'ny tanindrazanao ary manomboka miasa any ivelany. Miandry ny fangatahana foana ny orinasanay. Azafady, misoratra anarana ny CV anao amin'ny ekipan'ny HR. Ireo mpanolotsainay dia vonona hanampy anao amin'ny azo antoka!.
Mpitarika amin'ny Aetna International
Ny dia ny fihazana asa
Ny Career Care Sohaib Hasan